Soo degso PWDT Zlin Z-142 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 13 949
Pannon garabyada Kooxda Design
Alaab tayo wanaagsan leh oo ay soo bandhigtay Pannon garabyada Kooxda Design, tusaalaha asalka u ah FSX iyo P3D v4 +. Waxaa ku jira sawiro macmal ah oo faahfaahsan, dhawaaqyada ka yimid Zlin-ta dhabta ah, moodal duulimaad aad u sax ah oo ay tijaabinayaan duuliyeyaasha dhabta ah iyo macallimiinta. Sidoo kale, waxaa ka mid ah cabbiraadaha caadiga ah iyo 3D. Qaabka dibedda wuxuu ka kooban yahay 85,129 polygons. Xirmadan waxaa ku jira 9 nidaam oo rinjiyeyn ah.
The Zlin Z 42 waa hal engine laba-kursiga diyaaradda Tababaraha Czechoslovakian a soo saaray by Moravan Otrokovice. version A horumariyo, 142 Z ah, kala duwanaansho ah diyaaradaha ugu caansan ee line diyaaradaha saaraha ee.
Qoraa: Kooxda Naqshadeynta Naadiyada Pannon